Bolivia: Oraniôma Radioaktifa Notazonina tao La Paz? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2012 2:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Italiano, Aymara, မြန်မာ, Français, English
Tamin'ny 28 Aogositra 2012, noraofin'ny fitondram-panjakana boliviana ny vainga, voalaza fa uranium na singa radioaktifa milanja roa taonina izay niainga avy tamina tranon'olona manokana ao amin’ny distrika afovoan'i La Paz, manakaiky ny birao diplaomatika maro, [nefa] tsy nahitana fepetram-piarovana na fiambenana natao taminy.
Ny Governemanta Carlos Romero no nitarika ny hetsika, izay notanterahin'ny vondrona polisy manokana. Taty aoriana, nampahafantatra [es] Andriamatoa Romero fa araka ny fitiliana sy ny fanadihadiana natao tany amin’ny laboratoara dia “tsy radioaktifa” ilay vainga. Tsy misy noho izany ny loza “ ara-pahasalamana” mety aterany.
Na dia izany aza, nanambara ihany koa i Romero fa efa nisy ny fanadihadiana fanampiny nataon’ny Sampan-draharana Nasionaly misahana ny vohontany sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany Sergeotecmin [es] sy nataon'ny Ivon-toerana Boliviana Misahana ny Siansa sy ny Teknolojia Nokleary. Tsy mbola mazava noho izany ny maha-radioaktifa na tsia ilay vainga.
Nandraoka 2 taonina oranioma ny polisy tao Sopocachi, La Paz, ny 28 aogositra. Sary nozaraina tamin ny alalan ny Twitpic avy amin ny mpisera Twitter @pagina_siete
Nitantara ny zava-misy avy hatrany ny fampahalalam-baovao mahazatra ary namoaka izany nandritra ny tontolo andro. Ahiahy sy fanehoan-kevitra, ahitana vazivazy koa, hita tao amin’ny fampahalalam-baovao sosialy tamin’ny alalan’ny tenifototra hoe #uranio.
Mpamahana bolongana sady mpanao gazety Andres Gómez Vela naneho hevitra tao amin’ny kaonty Twitter-ny (@andrsgomezv) [es]:
@andrsgomezv: Ataovy ao antsainao, tsy mamokatra oraniôma i Bolivia. Avy aiza izany zavatra izany? Angamba nandalo teto avy any amin’ny firenen-kafa, hoy i Pérez, minisitra lefitra.
Fanampin’izany, tsikerain’ny mpiserasera ny tsy fetezan'ny fomba nangalana sy nikirakirana ireo ahiana ho vainga radioaktifa teo amin'ny toerana nakana azy voalohany.
Sioka anisan'ny voalohany indrindra nalefan’I Fernanda San Martin (@Fer_SanMartin) [es] naneho hevitra mikasika izany olana izany, ka niteraka valinteny avy hatrany avy amin’ireo bilaogera sy mpisera Twitter Mario Duran (@mrduranch) [es]:
@mrduranch: @Fer_SanMartin avy aiza? #uranio (uranium)? Tsy maintsy tehirizina anaty kaontenera tsara hidy ny toy izany, mampidi-doza io.
Andres Gómez Vela (@AndrsGomezV) [es] nanasongadina hoe:
@AndrsGomezV: Misalasala ny sasany #uranio: hatramin’izao mbola tsy nisy manam-pahaizana nijery sy nanamarina raha radioaktifa ilay vainga na tsia. Nahoana no notaterina toy izao izy io?
Renan Justiniano (@renanjustiniano) [es] namehy hoe:
@renanjustiniano: raha #uranio (uranium) ilay vainga hita omaly, ny zavatra voalohany tokony ataon’izy ireo dia ny manamarina raha radioaktifa izany na tsia fa tsy ny fiantsoana mpanao gazety! #bolivia
Mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ny maha radioaktifa na tsia ireo vainga noraofina tao La Paz.